မိန္းကေလးတစ္ေယာက္က မာနနွင့္ ေမြးလာဒါေျကာင့္ မာနေလး ထားၾကည့္ပါ - SANTHITSA
သူမေခၚရင္ ကိုယ္လဲ မေခၚပဲ ေနႏိုင္တဲ့ မာနေလး ထားၾကည့္ ပါလို႔ ကြၽန္မ ေျပာတဲ့အခါ ပထမဆုံးေတြးၾကတာက ေဝးသြားမွာေပါ့ တဲ့ ။
အဲ့ဒီအေတြးေတြေၾကာင့္ပဲ နာက်င္ခံစားေနရတာေလ ။ ေဝးသြားမွာစိုးလို႔ မခ်စ္ေတာ့မွာ ဆိုးလို႔ ပစ္ၾသားမြာစိုးလို႔ ဆိုတဲ့ ေသာကေတြနဲ႔ မာေနၾတ ဘယ္ေလာက္ ခဝါခ်ခဲ့ၿပီးၿပီလဲ ေတြးၾကည့္ပါ ။]
ေနာက္ဆုံး ကိုယ္ပဲ ဒဏ္ရာေတြနဲ႔ တစ္ေယာက္တည္းက်န္ ခဲ့တာပဲ ရွိတယ္ တကယ္ မခ်စ္ခဲ့တဲ့သူ အတြက္ေတာ့ လမ္းခြဲဖို႔ အေၾကာင္းျပခ်က္ မ်ိဳးစုံရွိေနႏိုင္ တာပဲေလ ။
အေတြးေတြ အမ်ားႀကီးနဲ႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ မသတ္ပစ္ လိုက္နဲ႔ေလ အေတြးေတြမ်ားရင္ အိပ္ေရးပ်က္မယ္ အလုပ္ပ်က္မယ္ သဘာဝ တရားႀကီး ကေတာ့ ဒီအတိုင္းလည္ပတ္ေနတာပါပဲ ကိုယ့္ကမာၻနဲ႔ ကိုယ့္ရင္ထဲမွာပဲ ဒဏ္ရာေတြ ျပည့္ႏွက္ေနမွာေလ ။
ဘဝမြာ ေပ်ာ္ေအာင္ ေနတတ္ခ်င္ရင္ ကိုယ့္အေတြးေတြကို အရင္ဆုံး ဂ႐ုစိုက္မွ ရမယ္ ။မိန္းမသားတို႔အတြက္ ကြၽန္မဘဝႏွင့္ ရင္းၿပီး ရခဲ့ေသာ သင္ခန္းစာမ်ား – သွ်င္ယြန္း စာအုပ္ City Mart ႏွင့္ Ocean ဆိုင္တိုင္းတြင္ ဝယ္ယူလို ႔ရပါၿပီ
ေသေလာက္ေအာင္ခ်စ္ေနပါေစ မိန္းမ မာနဆိုတာေလးေတာ့ နဲနဲေလးျဖစ္ျဖစ္ ထားပါ ။ စၿပီးခ်စ္ကတည္း အဆုံးထိခ်စ္ၾကမယ္လို႔ ေတြးတတ္တဲ့ ကိုယ့္ရဲ႕အက်င့္က အားနည္းခ်က္ႀကီး ျဖစ္မသြားေစနဲ႔ ငါ ဘာလုပ္လုပ္ သူ ခြင့္လႊတ္ေနမွာပဲလို႔ တစၹကၠ ေတြးသြားတဲ့အခါ ကိုယ့္ကို ျပန္စာနာဖို႔ သတိမရ တတ္ၾကေတာ့ဘူး ။
ႏွလုံးသားကို အလိုလိုက္ မွားတဲ့အခါ ဥပမာ . . . ဆိုးဆိုးေကာင္းေကာင္း သူမြ သူဆိုတာ သစၥာလို႔ လူေတြက ေျပာၾကတယ္ တကယ္တမ္း လက္ေတြ႕မွာ ကိုယ့္အေပၚတစ္စက္မွ မေကာင္းလဲ ဖၾကၱယၳားတာပဲ မဟုတႅား ။
လူတစ္ေယာက္ ကိုယ့္အနား လာရပ္႐ုံနဲ႔ တစ္သကႅဳံး ထြက္မသြားေတာ့ပါဘူးလို႔ ေတြးတတ္တဲ့ ေအၾတး အလြယ္တကူေလး ယုံၾကည္တတ္တဲ့ စိတ္ေလး ေဖ်ာက္ပါ ။
သူေတာင္မွ စ မေခၚတာ ကိုယ္လဲ မေခၚပဲ ေနမယ္ဆိုတဲ့ မာေနလး နဲနဲေလးပဲ ထားၾကည့္ ။ ေဝးသြားမွာေပါ့လို႔ ေတြးမိတဲ့အခါ တကယႅိဳ့ ေဝးသြားၾကတယ္ဆိုရင္ ေဝးသြားတယ္လို႔ပဲ မွတ္႐ုံပဲ ရွိေတာ့တာေလ ။
တစ္ဖက္ကသာ ေဝးသြားခ်င္ စိတ္ေလးသာ မရွိရင္ မရမက ဆက္သြယ္ လာမွာပဲဆိုတာေလး သိထားဖို႔ လိုတယ္ ။
သူမခေါ်ရင် ကိုယ်လဲ မခေါ်ပဲ နေနိုင်တဲ့ မာနလေး ထားကြည့် ပါလို့ ကျွန်မ ပြောတဲ့အခါ ပထမဆုံးတွေးကြတာက ဝေးသွားမှာပေါ့ တဲ့ ။
အဲ့ဒီအတွေးတွေကြောင့်ပဲ နာကျင်ခံစားနေရတာလေ ။ ဝေးသွားမှာစိုးလို့ မချစ်တော့မှာ ဆိုးလို့ ပစ်သြားမွာစိုးလို့ ဆိုတဲ့ သောကတွေနဲ့ မာနေတြ ဘယ်လောက် ခဝါချခဲ့ပြီးပြီလဲ တွေးကြည့်ပါ ။
နောက်ဆုံး ကိုယ်ပဲ ဒဏ်ရာတွေနဲ့ တစ်ယောက်တည်းကျန် ခဲ့တာပဲ ရှိတယ် တကယ် မချစ်ခဲ့တဲ့သူ အတွက်တော့ လမ်းခွဲဖို့ အကြောင်းပြချက် မျိုးစုံရှိနေနိုင် တာပဲလေ ။
အတွေးတွေ အများကြီးနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မသတ်ပစ် လိုက်နဲ့လေ အတွေးတွေများရင် အိပ်ရေးပျက်မယ် အလုပ်ပျက်မယ် သဘာဝ တရားကြီး ကတော့ ဒီအတိုင်းလည်ပတ်နေတာပါပဲ ကိုယ့်ကမ္ဘာနဲ့ ကိုယ့်ရင်ထဲမှာပဲ ဒဏ်ရာတွေ ပြည့်နှက်နေမှာလေ ။
ဘဝမွာ ပျော်အောင် နေတတ်ချင်ရင် ကိုယ့်အတွေးတွေကို အရင်ဆုံး ဂရုစိုက်မှ ရမယ် ။မိန်းမသားတို့အတွက် ကျွန်မဘဝနှင့် ရင်းပြီး ရခဲ့သော သင်ခန်းစာများ – သျှင်ယွန်း စာအုပ် City Mart နှင့် Ocean ဆိုင်တိုင်းတွင် ဝယ်ယူလို့ရပါပြီ
သေလောက်အောင်ချစ်နေပါစေ မိန်းမ မာနဆိုတာလေးတော့ နဲနဲလေးဖြစ်ဖြစ် ထားပါ ။ စပြီးချစ်ကတည်း အဆုံးထိချစ်ကြမယ်လို့ တွေးတတ်တဲ့ ကိုယ့်ရဲ့အကျင့်က အားနည်းချက်ကြီး ဖြစ်မသွားစေနဲ့ ငါ ဘာလုပ်လုပ် သူ ခွင့်လွှတ်နေမှာပဲလို့ တစ္ဖက္က တွေးသွားတဲ့အခါ ကိုယ့်ကို ပြန်စာနာဖို့ သတိမရ တတ်ကြတော့ဘူး ။
နှလုံးသားကို အလိုလိုက် မှားတဲ့အခါ ဥပမာ . . . ဆိုးဆိုးကောင်းကောင်း သူမွ သူဆိုတာ သစ္စာလို့ လူတွေက ပြောကြတယ် တကယ်တမ်း လက်တွေ့မှာ ကိုယ့်အပေါ်တစ်စက်မှ မကောင်းလဲ ဖက္တြယ္ထားတာပဲ မဟုတ္လား ။
လူတစ်ယောက် ကိုယ့်အနား လာရပ်ရုံနဲ့ တစ်သက္လုံး ထွက်မသွားတော့ပါဘူးလို့ တွေးတတ်တဲ့ အေတြး အလွယ်တကူလေး ယုံကြည်တတ်တဲ့ စိတ်လေး ဖျောက်ပါ ။
သူတောင်မှ စ မခေါ်တာ ကိုယ်လဲ မခေါ်ပဲ နေမယ်ဆိုတဲ့ မာနေလး နဲနဲလေးပဲ ထားကြည့် ။ ဝေးသွားမှာပေါ့လို့ တွေးမိတဲ့အခါ တကယ္လို့ ဝေးသွားကြတယ်ဆိုရင် ဝေးသွားတယ်လို့ပဲ မှတ်ရုံပဲ ရှိတော့တာလေ ။
တစ်ဖက်ကသာ ဝေးသွားချင် စိတ်လေးသာ မရှိရင် မရမက ဆက်သွယ် လာမှာပဲဆိုတာလေး သိထားဖို့ လိုတယ် ။ Source.sh H
လူသိနည်းတဲ့ အိမ်ဆောက်ရာတွင် လှေကားအကြောင်း သိကောင်းစရာ လူသိနည်းလှတဲ့ လှေကားအဆံ တပ်ဆင်ခြင်း သိကောင်းစရာ မျှဝေပါတယ်။ ရှေ့ထုံးလည်း မပယ်နဲ့ စျေးသုံးလဲ မကြွယ်နဲ့ စကားမျိုးလိုပါပဲ။ အိမ်တစ်အိမ် ဆောက်ရာတွင် အဓိကအရေးကြီးတာ အိမ်လှေကား ပြုလုပ်ခြင်းပါပဲ။ ရှေးကျမ်းဆရာတို့သည် စုံ မ နှစ်ခုလုံး တပ်ကောင်း၏ဟု ဆိုသည် လက်သမား ကျမ်းဆရာတို့က မကိုသာ တပ်စေပါတယ်။ လက်သမား ဆရာကြီးများမှာ စုံတပ်သည်လည်း ရှိတယ်။ မ တပ်သည်လည်း ရှိပါတယ်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ပထမအထစ်မှ [လာဘံ ၊သုခံ ၊မရဏံ ၊လာဘ သု ခ မရဏ] တွက်ယူကာ မရဏံ မရဏ ကို ရှောင်ပါတယ်။ …
အမေ လိမ်ပြောခဲ့တယ်နော် သောမတ်စ်အယ်ဒီဆင်ဟာ ကျောင်းစနေလို့ တစ်လအကြာ တစ်ရက်မှာ ကျောင်းက ပြန်လာတော့ ဆရာမပေးလိုက်တဲ့ စာအိတ်တစ်ခုကို သူ့အမေကို ပြလိုက်တယ်။ သူက ငယ်သေးတော့ စာမဖတ်တတ်သေးဘူး။ အမေဟာ စာအိတ်ကို ဖွင့်ဖတ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ အယ်ဒီဆင်ကြားအောင် စာကို အော်ပြီး ဖတ်ပြလိုက်တယ်။ “အမရဲ့ သားဟာ အလွန် ဉာဏ်ထက်မြက်ပြီး ပါရမီရှင်တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ ကျောင်းမှာ သူ့လောက်တော်တဲ့ ဆရာ ဆရာမတွေ မရှိကြလို့ အမပဲ သူ့ကို စာသင်ပေးလိုက်ပါနော်” အဲဒီအချိန်ကစပြီး သူ့ကို အမေက အိမ်မှာပဲ စာသင်ပေးပါတယ်။ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာတော့ သူ့အမေ ကွယ်လွန်သွားတယ်။ မကြာခင်မှာပဲ အယ်ဒီဆင်ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ …
“ကံကောင်းခြင်းတွေ ကိုယ့်ဆီရောက်လာဖို့ နေ့တိုင်း လုပ်ပေးရမယ့် အချက် (၇) ချက်”
“ကံကောင်းခြင်းတွေ ကိုယ့်ဆီရောက်လာဖို့ နေ့တိုင်း လုပ်ပေးရမယ့် အချက် (၇) ချက်” ကံကောင်းခြင်းဆိုတာ သူ့အလိုလိုဖြစ်လာတဲ့ အရာလား၊ လုပ်ယူလို့ရတဲ့အရာလားလို့မေးရင် ဘယ်လိုဖြေမှာပါလဲ။ တကယ်တော့ ကံကောင်းတယ်ဆိုတာကို လုပ်ယူလို့ရပါတယ်။ ကံကောင်းအောင် လုပ်ယူလို့ရမယ့် နည်းလမ်းလေးတွေကိုတော့ အခုပဲဖတ်ပြီး တကယ်ဖြစ်မဖြစ် လိုက်လုပ်ကြည့်လိုက်နော်။ (1)- စိတ်ရှင်းအောင်နေပါ စိတ်ထဲမှာမရှင်းတာမျိုး၊ စိတ်ဖိစီးမှု များနေတာမျိုး၊ စိတ်ခံစားချက်တွေ များနေတာမျိုး ဖြစ်နေတဲ့အခါ ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကညစ်နွမ်းနေပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ အတွေးတွေကို မတွေးနိုင်တော့ပါဘူး။ မကောင်းတဲ့ အတွေးတွေက ကံကောင်းခြင်းတွေ ကိုယ့်ဆီ ရောက်မလာအောင် တားဆီးနိုင်တာကြောင့် တတ်နိုင်သလောက် စိတ်ကိုရှင်းအောင်နေပါ။ (2)- အမြဲ သပ်သပ်ရပ်ရပ် ဝတ်စားပါ အဝတ်အစား အပြင်အဆင်တွေက အပေါ်ယံတွေလို့ ထင်ကြပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒါထက်ပိုပါတယ်။ …